Shabakadda Amiirnuur – Page 265
Mugabe oo La Xiray Iyo Milatariga oo La Wareegay Talada Zimbabwe.
Ciidanka Milatariga Dalka Zimbabwe ayaa gacanta ku dhigay talada dalkaas iyagoo xabsiga u taxaabay Madaxweynaha 93 jirka ah ee Roperto Mugabe. Mugabe ayaa todobaadkii hore shaqada ka ceyriyay ku xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa kadibna waxaa bilowday is fahamwaa iyo qulqulatooyin siyaasadeed. Taliyaha Milatariga Zimbabwe ayaa waxaa uu sheegay in haddii aysan xiisadda dejin […]
Magaalada Haraari ee caasimadda wadanka Zambabwe waxaa ka dhacay aroornimadii hore ee saaka 3 Qarax oo waaweyn, kuwaas oo aan la ogeyn waxay yihiin, iyo goobaha ay ka dheceen. Wadooyinka magaalada waxaa lagu arkayaa ciidamada milliteriga oo aad u farabadan, kuwaas oo wata gawaarida dagaalka ee Taangiyadu ku jiraan, islamarkaana […]
In Ka Badan 10 Askari oo Amisom Looga Dilay Weerar Ka Dhacay Sh/hoose.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta galinkii dmabe weerar dhabba gal ah u dhigay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Amisom xilli ay marayeen degaanka Ceel-wareegow oo ku dhow magaalada Marko ee gobolka Sh/hoose. Askartan ayaa waxaa markii ugu horeysay lagu weeraray qarax kaasoo si gaar ah loola […]
Saraakiil Mareykan Ah oo Lagu Dilay Duleedka Muqdisho Iyo Al-Shabaab oo Mas’uuliyadda Sheegtay.
Kolonyo gaadiid ah oo ay leeyihiin ciidamada shisheeye islamarkaana galbinayay saraakiil Mareykan ah ayaa duhurnimadii maanta lala beegsaday weerar naf hurnimo ah kaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur gaadiid. “Walaalow waxaan arkayay gaari mar qura dhex galay kolonyada kadibna geystay qarax weyn oo aad u weyn durbadiina […]
Farmaajo oo Caafimaad Dibadda Ah Loo Qaadayo Kadib Xanuuno Soo Wajahay.
Madaxweynaha dowladda federalka ah oo maalmahan wajahayay mashquul siyaasadeed iyo qulqulatooyin amni ayaa la xaqiijiyay in uu xanuunsanayo islamarkaana la go’aamiyay in dibadda loo qaado. Xogtan oo ay shaaciyeen warbaahinno dhowr ah oo uu kamid yahay Radio Al-furqaan ayaa ku waramaysa in madaxweynaha loo qaadayo dalka Turkiga, halka wararka qaar […]